Xageed ku Socotaa, bal miisaan maalmaha nolosha ee isguraya:
Sunday 15th April 2018 08:47:09 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Sare
Illaahay waa qani, danbi dhaafe adoomaha naxariista wada gaadhsiiya. Waxa maalmuhu i bareen in Alle qofka sida uu jecel yahay ama haabka uu ku hayo uun Alle arsaaqada u soomariyo, haddaad xalaasha jeceshay sidaas uun filo, haddise aad raacdo ugu jirto meel dhac-dhac le, wax u dhaw filo. 'Nin baahan nin buka badhax looguma dhiibo', waxa ay daaran tahay sheekada sawirka, qofku marka inta badan xil loo dhiibo Jinbaa galla iyo cabsi xilka haddii lagaa qaado hageed qaban, tani waxa ay dadka qaar gayaysiisaa in darka uu leefo, waxna uu u cuno siddii oo aan bari arsaaqadi jirin. Intaa waxa raaca noloshu waa imtixaan sida Alle ku yidhi suuratul Cankabuut/Caarada, Aayada 2: 'Dadku ma waxa ay moodayaan in lagu dhaafayo rumaynta oo aan la tijaabinayn, waa aanu tijaabinay kuwii idinka horeeyay, wuu ogaanayaa Alle kuwa ay ka dhab tahay iyo beenaalayashaba.' Arrinku waa imtixaan iyo hubsasho, haddaba dharaga iyo baahiduba waa laba imtixaan oo kala duwan oo dadka oo dhami ay ku jiraan imikaba, bal fiiri keebaad ku jirtaa adigu, ka bacdina xisaabtaada iyo waxa ku mashquuliya u eeg sidii oo aad bari ka tagayso adduunyada, iyo waxa aad jeceshay in dadku ay ka sheekaystaan marka lagu bud-dhigo, waxa kuu soo bixi doona ahdaaf nololeed oo ka qiimo iyo aragti dheer jihada aad hadda u socoto. Qor liista sifooyinka aad jeceshahay in dadku dhimashaada dabadeed kugu xanto, u badal u jeedooyin sugan, ka bacdi isku day in aad kuwaa culayska saarto maalmaha guclada ku jira.
Tusaale ahaan shaqo la'aantu waa imtixaan dhalinta sabanku ay wajahayaa, laakiin kuwa shaqeeya iyo kuwa aad fursad shaqo haynba waxa aan kula talin lahaa in ay ku buuxiyaan firaaqada ay haystaan barashada diinta oo aad Kitaab Quraanka ee mudada dheer ku agyaala aad fahamto, markaa bilaw in aad xeraw noqoto oo aad tafsiirka raacato, haddii aanad Af-carabiga ku fiicnayn, bilaw kooras sanada oo Carabiya, barashada Carabigu waa luqad caalamiya marka koowaad mar labaadna waxa ay kuu sahlisaa barashada diinta. Kitaabka Alle fahamkiisu waxa uu ku furi doonaa nolol cusub, fahamka xikmada nolosha iyo fariintii Alle oo koobsanisa dhamaan dhinacyada nolosha ee Ibnu Adamka oo ay ka mid tahay dhaqaalaha, siyaasada, sharciga, horumarka iyo akhlaaq dhamaystiran, waxa aanad arki doontaa adiga oo mudo yar gudahood firfircoonaaday horumarna sameeyay. Mabaadiida Quraanku uu tartiib tartiibta u dhigay isku day in aad fahamto dhamaantood, maxaa yeeelay dadka imika diinta bartaa waa dad aan aqoon kale lahayn markaa adigu waxa aad dheer tahay wixii aad hore u baratay, ku xigsii barasha sunnada Rasuulkeena (CSW) oo ah in aad kitaabka Bukhaari aad bilawdo ama kutubta kale ee u dhiganta, si aad u fahamto fulintii waxyiga Alle oo uu hogaaminayo nabi Muhamed (CSW). Jidkani ma dheera oo haddii aad Digriiga Jaamacada afar sano kugu qaadatay kaba yar, waana bilaash barashada cilmiga samaawigu inta badan. Waxa jira dad badan oo aanu saaxiibo nahay oo ka hela in aan u sheego buugaagta faraha badan iyo tabobada shaqo ee aan warkooda hayo oo si niyad samaana u dhageeysta markaa aan fikir u sheego, haddii aan dhaho buugaa anaa hayana jeclaysta in aan u soodiro. Laakiin marka Kitaabka Alle lagu waaniyo yar jeesta, markaa haddii aad yara jeedsato, xasuuso cadawgaaga oo ah Iblays iyo ardaydiisa oo jecel in ay kugu shaqaystaan jarna kaa tuuraan aakhiritaan ka, sida Alle inoo sheegay.
Nin dhalin yaro ah oo reer miyiya ayaa bari hore lagu wacdiyay in uu tukado, markaas buu yidhi waxa iman doonta mar aan wax kale aanan qaban doonin oo u uga jeedo, wali waxa aan ahay nin dhalin yaro ah oo waxa aan sugayaa inta aan gaboobayo iyo tusbaxa. Ha noqon kan oo kale, geedka waxa la toosin karaa inta uu yar yahay laakiin haddii uu qalooc ku jiridaysto waa ay adkaanisaa in la toosiyaa mustaqbalka. Midkiin waxa uu odhan anigu waxa aan ahay Siyaasi markaa, intaa fajiban iska eegayaa oo haddii aan tafsiirka bilaabo saw ciyaartu dhamaan maysto inta aan ku jeedo, haddii uu sidan kugu dhigo Shaydaanku, waxa laga yidhi adigu ma hubtaa in aad wax wado ileen isteerinka Alla kuu hayee, halkan iyo guushana isaga kugu simay. Ugu danbayntii wakhtigu waa ordayaa, wax aad cuntana waayi maysid, ama dharagsanaw ama waayuhu dabada ha ku yar hayo, waxa aan leeyahay waa la doogiye yaan la dacaroon, nolosha wakhtigeedu waa yar tahay ugu badnaan intaa aad si fiican u shaqayn kartaa haddan badiyo waa 65 sano, waxii intaa ka danbaysa haddiba aad noolaato dhan walba waad ka naafoobisaa inta aan raqdaada god lagu ridin. Markaa iska reeb xasuus mudan, xakamee naftaada, taageer dadka jilicsan, dadkana khayrka far, wanaaga ka shaqee, guushuna waa hortaada iyo hareerahaga In Shaa Allah
QALINKIII MAXAMUUD KHALIIF AXMED.
[Daawo Muuqaal:-] Kala-Fadhigii Golaha Deegaanka Gabiley Oo Furmay Iyo Tiradda Xildhibaanadda Soo Xaadiray + Miisaaniyad
Ma Dhabaa In Muuse Biixi Iyo Farmaajo Kulmayaan Maalmaha Soo Socda, Halkee Se Uu Ka Dhacayaa Is Aragoodu? [Akhri]
Guddoomiye Xinif ''Mar hadii aad somaliland timaadeen, Suuqa kala gala la idin odhan maayo, Nolosha gacan baa la
[Deg Deg] Xukumadda Somaliland Oo Mamnuucday Laba Telefishan Oo Maalmahanba Bulshadu Ka War Sugaysay In Tallaabada Laga
Duufaan Baaxad leh Oo La Filayo Inay Ku Dhufato Maamulka Puntland Maalmaha Soo Socda
[DEG DEG] Masuulkii Ugu Miisaanka Cuslaa Xisbiga Waddani Oo Hadda Ku Dhawaaqay Is Casilaad Iyo Sababaha Uu Isku Casilay
Maxaadiradda Saaka Iyo [Hadafka Nolosha Qofku Muxuu Yahay] Waxa Soo Jeedinaya Sh Mustafe Xaaji Ismaaciil [Muuqaal]
Wasaaradda Maaliyadda Oo Warbaahinta Isugu Yeedhay Iyo Miisaaniyaddii La Sheegay Inay Wax Ka Bedeshay Oo Daliil Difaaca
Hindiya: Gabadh Inta La Kufsaday Nolosha Lagu Gubay Iyo Dawladda Oo Lagu Dhaleeceeyay